TAMBAZOTRAN-TSERASERA « FACEBOOK » : Tsy marina ny filazana fa nisy matin’ny coronavirus tao amin’ny Hjra
Ny talata alina, 17 marsa hifoha ny alarobia 18 marsa lasa teo, niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera « facebook » ny filazana fa misy marary tratran’ny aretina « coronavirus » nindaosin’ny fahafatesana tao amin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. 19 mars 2020
Kaonty « facebook » ana renim-pianakaviana iray no nanaparitaka izany ary nanindry mafy tokoa fa voamarina fa efa misy ny aretina saingy afenin’ny mpitondra fanjakana ny tena zava-misy marina. Nilaza ihany koa ity farany fa tampenam-bava ireo mpitsabo mba tsy hilaza ny marina. Nisy mihitsy aza moa ny filazany tao anaty lahatsorany fa nisy mpitsabo iray nandray an-tanana ny marary nitsoaka avy hatrany nody any Ambositra manoloana io toe-javatra io.
Betsaka ny taitra sy nikoropaka raha namaky ny lahatsoratra kely navoakan’io kaonty io ka samy nandefa fanamarihana tany amin’ny rindriny avy ireo mpisera rehetra, naparitaka mba ho hitan’ny besinimaro izany. Tsy ela dia nosokafana ny fanadihadiana momba ity tranga ity ka nanatanteraka fanambaràna, omaly alarobia, ny dokotera Jean Marie Tale Teknikan’ ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona fa « tsaho no naely tamin’ity tambazotran-tserasera iray ity, miendrika fanakorontanana saim-bahoaka ny zavatra navoaka. Tsy marina velively ny filazana fa nisy matin’ny aretina coronavirus tao amin’izy ireo”.
Nohamafisiny ihany koa fa “ity hopitaly ity dia miompana betsaka amin’ny resaka fandidiana fa tsy fitsaboana akory. Eny amin’ny “Institut Pasteur de Madagascar irery ihany koa no anatanterahina ny fitiliana fa tsy ao amin’izy ireo“, hoy izy nanamafy ny fanazavany. Mila fitoniana ny rehetra ka tsara ny manatsidika hatrany fa tsy mbola tafiditra eto amintsika ity soritr’aretina iray ity. Ny eo anivon’ny Minisiteran’ny filaminam-bahoaka moa, ny fiandohan’ny herinandro lasa teo dia efa nanambara fa “ tsy misangy amin’ireo olona tia manaparitaka vaovao tsy marina izy ireo”. Arahin’ny mponina akaiky araka izany ny fandraisan’andraikitra amin’ireny olona mbola minia manely tsaho, mampikorontana saim-bahoaka manoloana ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao.